Nyenyedzi - Wikipedia
Zuva redu, inyeredzi.
Nyeredzi (Chingezi: star) kana nyenyedzi, muzvidzidzo zvechadenga, zvinoreva zviri muchadenga zvinobwinya zvichionekwa munguva yehusiku kana zuva radoka. Nyeredzi dzine hujoto hwakakwira zvokuti sebhe irimo inoshanduka kubva pakuva gasi rinopisa rashanduka kuita vurazvu hunenge hwemoto (plasma). Iwo vurazvu hwemoto imhando yomusandu ine mwando unopisa zvakanyanya zvokuti mahatomu anoshanduka kuva maayoni.
Zuva pacharo imhando yenyenyedzi uye ndiyo nyenyedzi iri pedyo zvakanyanya nepasirino. Kuzuva ndiko kunobva simba zhinji rinosvika pasi pano. Zuva rine kubwinya kwakanyanya zvokuti munguva dzemasikati dzimwe nyenyedzi dzinoita sokunge dzisipo tichiona kubwinya kwezuva chete. Nyenyedzi dzinozoonekwa kubwinya kwadzo munguva yemhanheru apo rimwe divi renyika rinenge rafuratira zuva rave murima.
1 Mazita eNyenyedzi
2 Zvimwe zvekutarisa
Mazita eNyenyedzi[chinja | edit source]
Tarisafi futi: Mazita eNyeredzi uye Mazita eNyeredzi neUnganyeredzi
Hwerera kana Hwevera uye Hweva (Venus)
Marinda?, Hwerera?, Kwevausiku (sirius) nyeredzi iyi yaizivikwa sa Drawer Up of the Night, Pulls the Night Across, Pulling Out the Dawn, straining, or pulling
Sirius inyeredzi inopenya kwazvo, yaionekwa senge Hweva, zvinogoneka kuti dzaisanganiswa nevanhu. Kana izvi zviri chokwadi kuti dzaisanganiswa zvinotsanangura mazita akawanda aHweva aienderana ne "nguva yaaionekwa".
Runyanga (canopus) inoziikanwa se 'horned star' mu tsika dze vanhu ve kuchamhembe che Afurika.
Gwara reZhou kana Gwara raKurumbi (Milky Way).
Chiunganyenyedzi kana chiunga chenyenyedzi (constellation)
Chisimira kana chinyamutanhatu (Pleiades)
Twizarume? (crux muchirungu kana male giraffe mutsika dzevanhu vekuChamhembe che Afurika)
Arufa Senduari (alpha centuari)
Hadhari (hadar kana beta centuari)
Ndemara (fomalhaut) "sweetheart star" [tarisai futi Ruambangano dzaNdemara]
Nguruvenembwa (orion constellation)
Mbwa kana Bhande raOrioni (orion's belt)
Nguruve kana Bakata raOrioni (orion's sword)
Ruambangano dzaNguruvenembwa (orion mythology)
Mazhara kana Shangwa (Small Magellanic Cloud) zvichereva kuti famine; drought 
Maguta kana Chokocha (Large Magellanic Cloud) zvekare plenty; abundance
Zvimwe zvekutarisa[chinja | edit source]
Ruambangano dze Zvechadenga
ne Ruambangano dza Hweva
ne Ruambangano dza Vhenekeratsvimborume
neRuambangano dza Chirema
VaNande vanoti erinyenyeta (n. shine) kureva kupenya. Sokuti: omubirí wíwe ányényetirȩ (his body shines). VaSwahili neVaDigo vanoti nyota (n. star) kureva nyenyedzi.
VaNyungwe, VaGiryama neVaDigo vanoti nyenyezi (n. star) kureva nyenyedzi. VaGanda vanoti munyenye (n. star) kureva nyenyedzi.
VaLenje vanoti nyenyeshi (n. star) kureva nyenyedzi. VaNyoro vanoti nyunyuzi (n. star) kureva nyenyedzi. VaFipa vanoti ulutongwa; ulutanda (Star) kureva nyenyedzi.
VaKikuyu vanoti cata; njata pakuwanda (star, stars) kureva nyenyedzi. VaZigula vanoti ntondo (n. star) kureva nyenyedzi.
Baila vanoti intanda (n. falling, shooting star, a meteor) zvichireva nyenyedzi inouruka - zvichida tingati nhanda.
Nsenga vanoti kunyavata (v. to glitter, to shine - used of sun and stars or that which shines by it's own light).
↑ https://web.archive.org/web/20210809174816/http://cobblestonepub.com/pages/FAODYShonaSky.html Yakatariswa: 10 Nyamavhuvhu 2021
↑ 'Zvechadenga kuChamhembe cheAfurika', Bright southern stars. Yakatariswa: Chikumi 2021
↑ 4.0 4.1 4.2 'Mwedzi, Nyeredzi ne Zvindeya' Nguruvenembwa. Yakatariswa: Chikumi 2021
↑ 'Zvechadenga kuChamhembe cheAfurika', The stars around Orion. Yakatariswa: Chikumi 2021
↑ 6.0 6.1 Zimboriginal, 30 Gunyana 2019 ,"Mwedzi, nyeredzi ne zvindeya" Maguta and Mazhara. Yakatariswa: Chikumi 2021
↑ 7.0 7.1 Koitsiwe_MT.pdf, 2.4.6 Kgora le tlala, peji 103-104. Yakatariswa: 10 Nyamavhuvhu 2021
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyenyedzi&oldid=91489"
This page was last edited on 15 Kukadzi 2022, at 14:00.